Oxford hampiantrano fampirantiana ao Tolkien amin'ny taona 2018 | Vaovao momba ny dia
Maria | | kolontsaina, About us
Sary | Hypertextual
Amin'ny taona 2018, fampirantiana lehibe iray momba ny endrik'i JRR Tolkien dia hatao any Oxford izay mampanantena fa hahasarika mpankafy sy manam-pahaizana an'arivony maro avy amin'ny lafivalon'ny planeta. Ny fampirantiana dia hatao ao amin'ny Weston Library, Oxford Bodleian Library, eo anelanelan'ny 1 Jolay sy 28 Oktobra 2018.
Raha liana amin'ny asan'i Tolkien ianao, eto ambany dia ho hitanao ny antsipirian'ny fampirantiana andrasana rehetra.
1 Oxford sy JRR Tolkien
2 Hanao ahoana ny fampirantiana?
3 Inona no ho hitantsika ao?
4 Aiza no hanaovana azy io?
5 Làlana iray mamakivaky an'i Tolkien's Oxford
5.1 Ny zaridaina botanika
5.2 College Merton
5.3 Museum Museum Ashmolean
5.4 Voromahery & Ankizy
Oxford sy JRR Tolkien
Fantatra manerantany ho mpanoratra ny 'The Lord of the Rings', teo amin'ny fiainana dia filôlôgy koa izy niahy ny fizotry ny famolavolana ny fiteny sy ny manam-pahaizana anglisy taloha sy anglisy antonony malaza.
Tamin'ny faha-19 taonany dia tonga tany Oxford izy mba hianatra teny klasika tao amin'ny Exeter College fa nivadika anglisy kosa taty aoriana. Taorian'ny nanompoany tamin'ny Ady Lehibe I dia niverina tany an-tanàna izy hiasa amin'ny New English Dictionary izay hanjary ho lasa Oxford English Dictionary.
Nipetraka nandritra ny dimy taona tao Leeds koa izy mba hiasa amin'ny maha mpampianatra anglisy amin'ny oniversitenany mandra-pahatongany tamin'ny 1925 dia niverina tany Oxford izy mba hampianatra amin'ny oniversite samihafa, izay hijanonany mandritra ny androm-piainany.
Sary | Tranombokin'i Bodleian
Hanao ahoana ny fampirantiana?
Eo ambanin'ny lohateny "Tolkien, ilay nahary ny afovoany-tany", ny sora-tanana, sarintany, sary, gadget ary taratasy avy any Etazonia sy i Angletera dia hatambatra voalohany hatramin'ny taona 1950. toy ny Tolkien Archive be an'ny Bodleian Library, ny Tolkien Collection an'ny American Marquette University ary fanangonana manokana tsy miankina.
Ity fampirantiana ity dia hanao fitsidihana ny tontolon'ny haisoratra, ny famoronana, ny akademika ary ny tokatrano izay nisy fiantraikany tamin'i JRR Tolkien amin'ny maha-mpanakanto sy mpanoratra azy, noho izany nahita endrika vaovao an'ity mpanoratra hajaina ity ary namela ny besinimaro hifandray tsy nisy toy izany tamin'ny asany.
Sary | Esquire
Inona no ho hitantsika ao?
Ny sora-tanana tany am-boalohany an'ny The Lord of the Rings miaraka amin'ny sary hosodoko tsara tarehy sy volavola ho an'ny fonony.
Drafitry ny The Hobbit mampiseho ny fivoaran'ny tantara miaraka amin'ny sarintany ho an'ny famoahana, sarisary, loko rano ary endrika ho an'ny fonony.
Ny Silmarillion dia ho avy eo amin'ny seho ihany koa miaraka amin'ireo sora-tanana tany am-boalohany amin'ity asa mbola tsy vita amin'ny angano elven ity.
Safidy iray amin'ny sarintany afovoan'ny tany afovoany hita tamin'ny 2015 izay misy ny fanamarihana nataon'ny mpanoratra tenany ary azony tamin'ny 2016 avy amin'ny Bodleian Library.
Vakoka isan-karazany, kojakoja zavakanto ary tranomboky manokana an'i Tolkien
Taratasy sy sary hatramin'ny fahazazan'i Tolkien sy ny fotoanany tamin'ny naha mpianatra azy izay niresahany lohahevitra toy ny famoizana, ady ary fitiavana.
Ny fampirantiana dia hiaraka amin'ny fanontana ny boky misy sary antsoina hoe 'Tolkien: The Creator of Middle-earth', amin'ny 25 Mey 2018, izay ho tahiry lehibe indrindra amin'ny JRR Tolkien fitaovana navoaka tamin'ny boky iray. Hanana fanontana misy sary an-tsary sy fanontana voafetra ho an'ny mpanangona izy io, miaraka amin'ny sary amin'ny sary hosodoko, sarintany ary sora-tanana nataon'i Tolkien. Hivoaka amin'ny endrika poketra 'Tolkien: harena' ihany io andro io ihany.
Aiza no hanaovana azy io?
Ny Weston Library, Oxford Bodleian Library, dia handray ny fampirantiana momba an'i JRR Tolkien, mpanoratra tantara an-tsary sy mpanao asa soa. Maimaimpoana ny fidirana amin'ny fampirantiana fa ny tapakila ho an'ny fotoana voafetra dia azo atao amin'ny Internet.
Hazo ankafizin'i Tolkien | Sary avy amin'ny Pinterest
Làlana iray mamakivaky an'i Tolkien's Oxford
JRR Tolkien dia mpamorona ny Middle Earth, izao rehetra izao mahafinaritra indrindra amin'ny fahaizany amin'ny haisoratra. Ny eritreriny goavambe dia nahatonga azy hitoe-jaza 'The Hobbit' (1937) sy 'The Lord of the Rings' (1954 - 1955). Manararaotra ny fitsidihana ny fampirantiana izay hatao ny 1 Jolay any Oxford, mety tsara raha manakaiky ireo toerana nanentana anao hamorona an'ity tontolo ity tokana sy mahasarika. Ireto ny sasany amin'izy ireo:
Ny zaridaina botanika
Iray amin'ireo zoro tiany indrindra any Oxford. Ity ny hazo tiany indrindra, kesika mainty aostraliana nianjera tamin'ny 2014 taorian'ny 215 taona niorenany.
Ao amin'ny The Lord of the Rings, velona ireo hazo rehefa lasa Ents ary manampy ireo mahery fo amin'ny fikatsahany ny herin'ny ratsy.
Sary | Tapaka i Mama
Teo anelanelan'ny taona 1945 sy 1959, Tolkien dia mpampianatra profesora amin'ny teny anglisy sy ny literatiora tao amin'ny Merton College. Nipetraka sy nanoratra teny ivelany teny ambony latabatra taloha teo amin'ny zaridaina ilay mpanoratra.
Ny toerana dia mampatsiahy ny toerana nitrangan'ny filankevitr'i Elrond tao Rivendell, izay nipoiran'ny Fellowship of the Ring malaza.
Sary | Anarana
Museum Museum Ashmolean
Io no tranombakoka voalohany oniversite eto an-tany. Ao anatin'ny fanangonana azy dia ahitantsika ireo zavatra avy any Egypt Egypt, sary hosodoko nataon'i Titian, Rembrandt, Manet na Picasso, sary nataon'i Leonardo da Vinci na Michelangelo ary koa fanangonana peratra volamena misy soratra eo amboniny. Toa mahazatra anao ve izany?
Voromahery & Ankizy
Tao amin'ity trano fisotroana ity teo anelanelan'ny 1933 sy 1962 Tolkien sy ireo mpikambana hafa ao amin'ny vondrona literatiora The Inklings dia nihaona tamin'ny lahateny momba ny literatiora ary nahafinaritra ny nitady tamin'ny pint matsiro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » About us » Oxford hampiantrano fampirantiana ao Tolkien amin'ny taona 2018
Inona no ho hita any Seville